မောင်ရင်ငတေ ** MAUNGYINNGATAY **** မောင်ရင်ငတေ ***: ** နော်မန်ဒီ တံငါ ** * ** MAUNGYINNGATAY ****
** နော်မန်ဒီ တံငါ ** * ဘဝထဲကလူသား
** နော်မန်ဒီ တံငါ
တံငါ (ဓါတ်ပုံ မရငတ)
အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြား ရေပြင်က ... တနေ့တာ လုပ်ငန်းခွင်ကနေ ပြန်လာနေတဲ့ ပြင်သစ် တံငါအိုကြီး
တယောက်ရဲ့ အိမ်အပြန် ခြေလှမ်းများပါ၊
သူထိုင်နေကျ ကဖေးဘားလေးမှာ အမောပြေထိုင်ရင်း ဘီယာတခွက် ချလေမလား ခပ်ပြင်းပြင်း ဒေသထွက်
ကာဗားဒိုလ်း ပန်းသီးအရက်တခွက်ကို မော့လေမလား … .. ..... . . .. . ….. .. . မောင်ရင်ငတေ
တွေးနေမိတာပါ၊ ကိုယ်တိုင်ကသာ လက်ကြောတင်းအောင်
မလုပ်တတ်ပါတဲ့ မောင်ရင်ငတေ တယောက်ကတော့ သူများတွေ လက်ကြောတင်းတာကိုတော့ စာနာမိပါလေ
. .... ရဲ့ . . .... . .. . . .. . …. .
.. …… ၊
နှစ် ၇၀ က ကမ္ဘာကျော် နော်မန်ဒီကမ်းတက်တိုက်ပွဲများကြောင့် နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ရေပြင်ပါ၊ ဒီကနေ့ မောင်ရင်ငတေတို့ ခေတ်ကာလများမှာတော့ အဲဒီလို . ... ….. .. စစ်သမိုင်း အဟောင်းအမြင်းများရဲ့
ဇာတ်ကြောင်းတွေကို စိတ်ဝင်စားသူတွေရော ပင်လယ်ကမ်းခြေ သဲသောင်ပြင်တွေကို ချစ်မြတ်နိုးသူများနဲ့ပါ
စည်ကားလှပါတယ်၊ အဲသလို စည်ကားလာတဲ့
အကြောင်းရင်းတွေနဲ့အတူ ကပ်လျှက်တွဲလို့ ပါလာခဲ့တာကတော့ . . …… စားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်းတွေပါ၊
လူတွေဟာ အစာမစားဘဲ နေနိုင်ကြတဲ့ သူတွေမှ မဟုတ်တာ၊ အဲလို အစာစားမှုနဲ့အတူ
ဒေသခံတွေ စားမှုအတွက် အပြင် ဒီနေရာကို လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ သူတွေအတွက် စားသောက်ဆိုင်တွေ
.... အစားအစာတွေ လိုလာပါတယ်၊
တံငါလုပ်ငန်းတွေ တံငါသည်တွေ လိုအပ်လာပါတယ်၊
လိုအပ်ပါတဲ့ တံငါသည်ကြီးက သူဘဝကို သူ …. ….
ကျေနပ်ပါရဲ့လား . .. .. …၊
တွေးမိယုံ တွေးမိရတာပါ၊ တကယ်တော့ သူက တံငါသည်
ပြင်သစ်ကြီး တယောက်ပါ၊ မောင်ရင်ငတေကကော ဘာပါလဲ . …၊
မနက်ကြီး မိုးလင်းလာတာနဲ့ ပထမအဦးဆုံး တောင်းဆိုခံရတာ ကတော့ အစာအိမ်ရဲ့ အသံမျိုးစုံပါ၊ အဲဒီ အစာအိမ်ရဲ့ အသံအတွက်ကြောင့် အလုပ်မျိုးစုံကို လူမျိုးစုံ အကုန် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ
ရုန်းကန်လှုပ်ရှား လုပ်ကိုင်ကြရပါတယ်၊ အဲဒီလို အလုပ်တွေမျိုးစုံကို
အမှတ်တမဲ့ မှတ်တမ်းတင်မိခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်၊
စိတ်ထဲခံစားမိ ရခဲ့ရင် ရခဲ့သလို မောင်ရင်ငတေ ရေးထားခဲ့တာလေး တွေကို ပေါင်းစုပြီး ဖော်ပြချင်စိတ်